सेक्स वा चुम्बनले कोरोना भाइरस फैलाउँछ ?
कोरोना भाइरस मानव कपालको भन्दा नाैसय गुणा सानाे हुन्छ। तसर्थ, यसले सजिलै मानवलाइ शिकार बनाउन सक्छ ।
के व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएर भाइरस फैलन्छ?
स्वास्थ्य विज्ञहरू भन्छन् कि बिरामीको नजिक जाने पछि तपाईलाई कोरोना भाइरस हुनेछ वा हुँदैन, यो things चीजमा निर्भर गर्दछ।
पहिले, तपाईं शिकारको नजिक कसरी जानुहुन्छ। दोस्रो, कि पीडितको थोपा खोक्रा वा छींकने बित्तिकै तपाईंमा खस्यो। तेस्रो, तपाईं आफ्नो अनुहारमा हात राख्दै हुनुहुन्छ। चौथा, तपाईं कत्तिको स्वस्थ हुनुहुन्छ वा तपाईं कति वर्षको हुनुहुन्छ, किनकि वृद्धहरूको प्रतिरक्षा प्रणाली राम्रो छैन, किनकि यसले तिनीहरूलाई छिटो सिकार बनाउँछ।
पीडितको दूरी कति छ?
विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रवक्ता क्रिश्चियन लिन्डमायरले भनेका छन् कि कोरोना भाइरसका साथ जिउने व्यक्ति कम्तिमा एक फिट टाढा हुनुपर्दछ।
जबकि रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रद्वारा जारी दिशानिर्देशहरुमा पीडितबाट फिटको दूरी हुनु आवश्यक छ भनिएको छ।
सम्पर्कको माध्यमबाट भाइरस कति पटक फैलिन्छ?
स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू अझै यो निष्कर्षमा पुगेका छैनन् कि पीडितको सम्पर्कमा कति पटक आयो, तपाईलाई कोरोना भाइरस लाग्न सक्छ। उनी भन्छन् कि जति धेरै बिरामीहरू नजिक आउँछन्, खतरा त्यति नै बढी हुन्छ।
के भाइरस बस, रेल वा सार्वजनिक स्थानहरूमा छुनमा फैलिन्छ?
बस, रेल वा कुनै सार्वजनिक ठाउँमा चीजहरू छुनु कोरोना भाइरसको फैलिएको पूर्ण खतरामा छ। हङकङकाे स्वास्थ्य केन्द्रले दावी गरेको छ कि यहाँ बौद्ध मन्दिरमा आएका धेरै भक्तहरू यस घातक भाइरसको शिकार भइसकेका छन्।
के कोरोना भाइरस तपाईसँग वा अरु छेउमा बस्ने व्यक्ति द्वारा फैलाउन सकिन्छ?
यो पुष्टि भइसकेको छैन कि कोरोना भाइरस कणहरूले तपाइको क्षेत्रमा पर्खाल वा गिलासमार्फत प्रवेश गर्न सक्दछ। हो, तर यदि पीडितको छींक खस्छ र यदि तपाईं उनीसँग सम्पर्कमा आउनुभयो भने, तब जोखिम बढ्न सक्छ।
के सेक्स वा चुम्बनले कोरोना भाइरस फैलाउँछ?
विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छ कि कोरोना भाइरस यौन संक्रमित रोग होइन। स्वास्थ्य विशेषज्ञ पनि भन्छन् कि पीडितलाई चुम्बन गरेर, यो निश्चित रूपमा फैलिनेछ।
के कोरोना भाइरस जनावरहरूमा पनि फैलिन्छ?
स्वास्थ्य विशेषज्ञ ह्वाइटटेकरहरूले मानव र जनावरहरूमा कोरोना भाइरसको फैलावटको अनुसन्धान गरेका छन्। उनले भने कि कुनै प्रमाण भेटिएन कि कोरोना भाइरस मानिसबाट जनावरहरूमा पनि फैलिन सक्छ।
के त्यहाँ व्यक्तिले खाना खान सक्छन् जहाँ पीडितले खाए?
यदि पीडितले आफैंले खानाको लागि आफ्नो हात राखिदिएको छ वा धेरै व्यक्तिहरू कम ठाउँमा खानाको लागि भेला भएका छन् भने भाइरसको जोखिम बढ्न सक्छ। जे होस्, यदि खाना राम्रोसँग गरम गरिएको छ भने भाइरस सुस्त हुन सक्छ।
‘नागरिकको जीवनरक्षाक ...
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकको जीवनरक्षाका लागि सरक ...
प्रदेश १ मा ७२५ जनाम ...
विराटनगर/ प्रदेश १ मा पछिल्लो २४ घण्टामा ७२५ जनामा कोरो ...
२,५६८ जनामा कोरोना ...
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर दुई हजार ५६८ जना कोभिड संक्रमि ...
नेप्सेमा सामान्य वृद ...
आज नेप्सेमा व्यापार, विकास बैंक, हाइड्रोपावर, उत्पादनमू ...
‘नागरिकको जीवनरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध’
प्रदेश १ मा ७२५ जनामा कोरोना संक्रमित थपिए, १७ जनाको मृत्यु
२,५६८ जनामा कोरोना संक्रमण, १८ जनाको मृत्यु
नेप्सेमा सामान्य वृद्धि, हाइड्रोमा लगानीकर्ताको आकर्षण
१३५९ वटा घर पास